Toriteny Alahady 11 Novambra 2018 – Ecar Sainte Anne Anjomakely
“Izay tia mahafoy”.
Eto am-piandohana, marihina fa mety hovoatarika ny saintsika hievitra fa mifanohitra ny tenin’Andriamanitra novakiana tamintsika. Tao amin’ny boky IMpanjaka17, 10-16, i Elia nangataka ny mofo farany tao an-tranon’ilay vehivavy mpitondratena. Tao amin’ny Evanjely kosa, Marka 12, 38-44, I Jesoa milaza fahoheloina ny mpanora-dalàna izay mihinana ny fananan’ny mpitondratena. Ny Tompo anefa no naniraka an’I Elia, fa tsyny Tompo velively kosa no naniraka ny mpanora-dalàna hihinana ny sakafon’ny mpitondra tena. Araka izany, tsy tokony ho raisina ara-bakiteny ny tenin’ny Soratra Masina.
Ny fahafoizana ve no fepetran’ny fitiavana? Tsy azo lazaina hoe tia ve raha tsy mahafoy? Ary izay mahafoy rehetra ve dia tia? Amin’ny fahafoizana ihany ve no ahafantarana fa tia ny olona iray? Inona notokony ho ao ambadika ny fahafoizana? Tao amin’ny Evanjely, I Jesoa nilaza fa ilay mpitondratena nandrotsaka farantsa roa no nahafoy be indrindra satria izay tena ilainy no nafoiny ho an’ny Tompo.
Andriamanitra mahafoy be ho an’ny olombelona.Ny olombelona mihitsy aza no efa endriky ny fahafoizan’Andriamanitra ankoatrany masoandro, ny rivotra iainana sy ny sisa. Isika kosa no mody tsy mahita ireo fahasoavana omena antsika ireo. Ary isika ve mba mahafoy ho an’Andriamanitra ? Ny fahafoizana izay tsapa fa tena mangirifiry no tena fahafoizana avy amin’ny fo, fa tsy ny fandrotsahana ny ambim-bava, araka ny Evanjely norenesina teo. Ary ny Tompo mahalala izay any am-pon’ny tsirairay, manamafy izany ny ao amin’ny boky I Samoela 16, 17: “… Ny olombelona mijery ny tarehy, fa ny Tompo kosa mijery ny fo.” Mila omanina ary ny fahafoizana atao ho an’ny Tompo mba ho tena avy amin’ny fo tokoa, ary ny tena mahafoy dia izay mahafoy an’izao tontolo izao ka manaraka an’I Jesoa.
Farany, fihetsika mendrika halain-tahaka amin’ny fiainana an-davanandro ny fihetsika nataon’i Jesoa: nipetraka Izy, nijery, niantso ny mpianany, ary izay vao niteny. Matetika mantsy avy hatrany isika dia mifampiteny rehefa misy tsy fifanarahana ao an-tokatrano. Hanampy antsika amin’ny fitadiavana vahaolana ny manao tahaka nynataon’i Jesoa. Tokony samy hipetraka aloha, mifampijery, mifampiantso moramora ary izay vao mifampiresaka. Ezaka voalohany tokony ho tanterahin’ny mpianakavy anefa ny miara mivavaka mba hanamafy orina ny fifankatiavana.